Uncategorized – Oromedia
Maanguddoon Oromoo waggaa 107 dubartii umrii 33 fuudhan
August 15, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Oromedia, 15 Hagayya 2017) Maanguddoon Oromoo waggaa 107 gidduu kana gaa'ila raawwachuun dubartii waggaa 33...
Ayyaana Gindii Hiikkaa Godina Horroo Guduruu
(Oromedia, 15 Hagayya 2017) Yeroon kun qonnaan bultoota Oromoof hiikaa addaa qaba. Bakka gariitti, yeroo...
Sirni awwaalchaa Eda’oo Booruu (1952-2017) Maqiitti raawwatame
August 1, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Finfinnee, Hagayya 1, 2017) Sirni awwaalchaa Hayyuu Seenaa Oromoo, Ob Eda’oo Booruu Odaa, sirna hoo'aa...
Seemaan hundee seera uumaa fi uumama Oromoo ti.
June 28, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Oromedia, 28 Waxabajjii 2017) Oromoon seera uumaafi uumamaa mataasaatii qaba. Kana jechuun Waaqni akkaataa itti...
Kora xiqqaan miseensotaa gaggeeffame; Guyyaan Gootota Oromoos kabajame.
May 9, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Oromedia, 9 Caamsaa 2017) Kora xiqqaan miseensota ABO kutaa Scandinavia gaggeeffame; Guyyaa Gootota Oromoos Magaalaa...
(Oromedia, 6 Caamsaa 2017)Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneen dachee Oromoo fi handhuura Oromiyaa tahuu ibsa Caamsaa...
(Oromedia, Finfinnee, Gurraandhala 28, 2017) - Sirni wal-harkaa fuudhinsa Baallii Gadaa Oromoo Booranaa har’aa jalqabee guyyoota...